Kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-villa evaliweyo eMinamiaso Village njengendlu yesibini elinganiselweyo kwiqela elinye ngosuku. - I-Airbnb
Kuyacetyiswa ukuba usebenzise i-villa evaliweyo eMinamiaso Village njengendlu yesibini elinganiselweyo kwiqela elinye ngosuku.
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMasahide
Igumbi lokulala elikhulu linegumbi elikhulu, kwaye igumbi lesitayela saseJapan lixhotyiswe ngekotatsu moat (ebusika kuphela). Inomthamo wabantu aba-5, kodwa ukuba usebenzisa i-futon enye, ingakwazi ukuhlalisa abantu aba-6. Ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese inkulu ngokwaneleyo kwaye ixhotyiswe ngezixhobo ezaneleyo ukuze ungaziva uphazamisekile ekusebenziseni ixesha elide. Ikhitshi linomlinganiselo omncinci wokusongelwa, irayisi, kunye neemveliso zomgubo esitokhweni kwaye zingasetyenziswa simahla. Ukuba kukho isicelo sondwendwe, siya kutyelela igumbi kwaye sithethe nawe, kodwa ukuba awunaso isicelo esithile, asiyi kuphazamisa de uhambe emva kokuzalisa uluhlu lweendawo zokuhlala kunye nokuthetha ngemithetho elula yendlu ekungeneni. .
Ekubeni ibekwe phantsi kweNtaba ye-Aso kwindawo ephakamileyo ye-600m, unokudibana nezilwanyana zasendle ngokuqhelekileyo. Kuba sikwimo yokuhlalisana nendalo, nceda uqonde ukudibana okungalindelekanga kwindawo. (Ukongezelela, kuyalelwe ukuba umamkeli kufuneka abe khona ukuze asebenzise isitovu ngezizathu zokukhusela umlilo.)
Mna ngokwam ndinamava kwishishini le-inshurensi kunye nococeko lwelayisenisi kuphela kwiihotele, ipenshoni, iivenkile zokutyela, njl., Ngoko ke ndihlala ndizama ukugcina indawo ecocekileyo ngokucoca kunye nokubulala iintsholongwane. Nceda uqiniseke kwaye wonwabele uhambo lwakho kwaye uhlale eMinamiaso.
Kukwakho ne solarium eneengcango zeaccordion. Isetyenziswa njengendawo eyomileyo yokuhlamba impahla, kodwa ifanelekile nakwiindawo zokugcina izityalo kunye ne-naps. Ebusika, amagumbi amaninzi axhotyiswe ngokufudumeza ngaphantsi, kwaye ikhitshi ixhotyiswe nge-dishwasher kunye nesomisi. Kuba iyiseti elinganiselweyo, ndicinga ukuba ayinamsebenzi, kodwa ndicinga ukuba kukho uxolo lwengqondo ngakumbi kwiCorona kuba inkqubo yokungenisa umoya yeeyure ezingama-24 nayo iyasebenza.
50" HDTV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Ijikelezwe yimbonakalo entle yentaba-mlilo enkulu yecaldera emhlabeni, khenkcela kwimithombo eshushu
Ukuba uyangcamla inyama yenkomo ebomvu, imifuno kunye neziqhamo zaseMinamiaso, ngokuqinisekileyo iya kuba luhambo lokuhlakulela umoya wangomso.
Umbuki zindwendwe ngu- Masahide
Ekubeni ndihlala ndihlala kwigumbi lokunyamekela abantu, ndiyakwazi ukuphendula nanini na ngaphandle kwaxa ndilala.
Inombolo yomthetho: M430024881